Ngawaphi amaxabiso anokufakwa kwipotifoliyo kweli hlobo? | Ezezimali
Ngawaphi amaxabiso anokufakwa kwipotifoliyo kweli hlobo?
Izabelo zaseSpain zithengiswa kwiimarike zamasheya zizonke zizigidi ezingama-42.011 zeerandi ngoJuniIipesenti ezingama-4,6 ngaphezulu kunangoMeyi. Kwisemester yokuqala, ivolumu yokuqesha yehle ngama-26,1%. Ngelixa kwelinye icala, inani lothethathethwano ngoJuni yayizi-2,8 yezigidi, i-6,8% ingaphantsi kwenyanga ephelileyo kwaye i-27,9% ingaphantsi kunoJuni ka-2018. Kwelinye icala, intengiso ye-diimali ezenziwayo urhwebo lonyuke nge-10% kwiinyanga ezintandathu zokuqala zonyaka xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo. Ngexesha apho intandabuzo ziveliswa kwizigqibo zabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Ngale ndlela, isebe lohlalutyo lweBhanki libonisa ukuba "kwiinyanga ezidlulileyo, emva kokunyuka kweenyanga zokuqala zonyaka singena kwisigaba esisecaleni ngakumbi apho siza kuphila khona amaxesha okusika (njengenyanga kaMeyi) kunye neenyanga zokonyuka (njengale nyanga kaJuni iphelileyo) ”. Bakwachaza ukuba ngeli xesha "sihamba ngexesha lokungabikho kwezinto eziphambili ezincedisayo kwaye okwangoku akukho zimpawu zokonakala okusikhokelela ekucingeni ukuba uqoqosho lunokungena kwisivumelwano ngakumbi okanye kancinci."
Ukujonga phambili kwiinyanga zikaJulayi-Agasti kwaye sinikwe esiqhelekileyo ukwehla kwemithamo Oko kwenzeka kwezi nyanga akufuneki sikhathazeke ukuba kwenzeka inzuzo kwiimarike zesitokhwe kwaye kufuneka sikutolike njengethuba lokuhlengahlengisa iipotifoliyo okanye sithenge into. Ngenxa yoku, akusayi kubakho khetho ngaphandle kokuhlenga-hlengisa kwaye ngendlela ethile uhlengahlengise ipotifoliyo yezokhuseleko kwiinyanga ezintlanu ezidlulileyo zonyaka. Apho kunokwenzeka khona ukuvelisa iintshukumo kwiimarike ze-equity ngokunyaniseka okukhulu kunakwisiqingatha sokuqala sonyaka. Kunye noluhlu lwamaxabiso anokubangela umdla wokuhlaziya onomdla kakhulu ukuze abatyali mali abancinci nabaphakathi bakwazi ukwenza ukonga kwabo kunenzuzo.
1 Ipotifoliyo yezokhuseleko: yeyiphi ekufuneka ibandakanyiwe
2 I-Telefónica inokumangaliswa
3 Thatha ithuba lokusikwa kwi-Naturgy
4 U-Amadeus uhlala ezinzile kakhulu
5 IAG isekwe kwixabiso leoyile ekrwada
Ipotifoliyo yezokhuseleko: yeyiphi ekufuneka ibandakanyiwe
Kule meko ngokubanzi, ezi ntsuku kufuneka zisebenze ekukhetheni iqhinga lotyalo-mali esilifunayo kwiinyanga ezizayo kwaye ngakumbi ejongene nokuphela konyaka. Ngapha koko, asinakulibala ukuba eli lithuba elihle lokuhlengahlengisa ipotifoliyo yotyalo-mali kwiinyanga ezidlulileyo zalo nyaka. Kwesi sicwangciso-buchule, iBanco Santander inokuqukwa emva kokuwa okunzima okuphucukileyo kwisiqingatha sokuqala sonyaka. Apho ibhekiswe khona kumanqanaba ee-euro ezingama-4 ngesabelo ngasinye. Kwaye kubonakala ngathi iphendulile ngoxinzelelo olubalulekileyo nolunomdla lokuthenga.
Nangona kuyinyani ukuba icandelo lobuchwephesha kwicandelo lokugcina imali alilunganga kwaphela, kunokwenzeka ukuba wenze uqikelelo oluncinci kwiziko lezemali losapho lwaseBotín. Akunakulityalwa ukuba yeyona bhanki ikhuselekileyo ngalo mzuzu kwaye yeyona inamathuba amahle okufumana izikhundla zayo ukusukela ngoku. Ngaphaya kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha kwaye inokubonakala kwinqanaba lokujonga izinto ezisisiseko. Ukongeza, ibonelela ngenzuzo ngokusebenzisa Izabelo eziqikelelwa kumyinge we-5,5%. Ngasentla kunikezelwa yinxalenye elungileyo yezokhuseleko ezenza isalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35.
Umnxeba wonxibelelwano kazwelonke unamatyala afanelekileyo kwaye le yeyona nto iwathinteleyo ekuphuhliseni ukusebenza okungcono kwiimarike zezabelo. Kodwa ukurhweba kumanqanaba asondele kwii-euro ezingama-7, inendlela eya phambili ukuba ixesha lokuzinzileyo liphakathi kwaye lide. Ngayo yonke into eqinisekileyo ukuba kwisithuba seminyaka embalwa uya kuyenza igqithe amanqaku ayi-8 eeuros isenzo. Ukusuka kolu luvo, inokuba sesinye sezona sitokhwe zinenzuzo kwimarike yaseSpain ukuba ixabiso lokungena lilungelelaniswe kakuhle. Nangona ukunqongophala kwenkcazo kunokuqhubeka nokubakho ngokuhambelana namaxabiso abo kwiintsuku okanye kwiiveki ezizayo.
Enye yenkuthazo yayo ephambili sisabelo esithandekayo esisasaza kubanini zabelo. Ngomdla osondele kakhulu kwi-6% nakwinxalenye ephezulu yomvuzo wale ngcinga phakathi kwamalungu e-Ibex 35. Ngelixa kwelinye icala, inzima kakhulu ukuba isenokuya isezantsi kunalapho ikhoyo ngoku kuluhlu. Isizathu esaneleyo ngaphezu kokuba nayo kwipotifoliyo kwinxalenye yesibini yalo nyaka. Nangona inokubonisa Ukungaqheleki okungaqhelekanga kuluhlu lwayo kwimarike yemasheya, njengoko inenye yeetshipsi ezinkulu eziluhlaza zaseSpain.
Thatha ithuba lokusikwa kwi-Naturgy
Inkampani yombane iye yabonisa ithoni ethe kratya ezantsi kwinyanga kaJulayi. Kunye Ukuhla kwexabiso kwixabiso elingaphezulu kwe-10%, ethi lukhulu kwinkampani yezi mpawu. Emva kokuphuhlisa kwisiqingatha sokuqala sonyaka ukutsalwa okunyanzelekileyo kufanelekile ukukhankanywa kwaye kukhokelele kwimeko yokunyuka simahla. Ngeli xesha, kunokwenzeka ukuba uthathe ithuba lokuwa okubukhali ukuthatha izikhundla kwixabiso kuba amandla alo okuhlaziya anokuphinda abe mkhulu kunangaphambili. Nangona kungaziwa ukuba umgama okhoyo ngoku wokuthengisa onabanini zabelo abancinci nabaphakathi banokuthatha phi.
Ngayiphi na imeko, inomdla wokuba yenye yeenkampani ezidwelisiweyo ezinikezela esona sabelo sabanini zabelo. Ngenzuzo kwiminyaka embalwa ezayo enokusondela kakhulu kwi-7%. Oko kukuthi, kwi-echelon ephezulu yesalathiso esikhethiweyo kwii-equities zesizwe kwaye eso sisizathu esaneleyo ngokubhekisele kubatyali mali abazikhuselayo ukuba bangene kwizikhundla zabo kule nxalenye yonyaka. Ngaphandle kokudodobala okukhulu kwaye oko kuye kwamangalisa inxenye entle yabo. Kuba bekungalindelwanga konke konke, kodwa kuya kufuneka uyithathe kwimbono elungileyo yokuba ungazithenga izabelo zakho ngexabiso eliphantsi.
U-Amadeus uhlala ezinzile kakhulu
Ukuba awufuni ukuba nezinto ezothusayo kule nxalenye yonyaka, eli lixabiso elinokucetyiswa kakhulu ukwenza ulondolozo lube nenzuzo ukusukela ngoku. Ukunxibelelana kwayo necandelo lezokhenketho kuyindima eyidlalayo. Ukuze ngale ndlela, uhambe ukwenza ingxowa yokonga zethuba eliphakathi nelide. Nangona kule meko, ngentlawulo yesahlulo esithobekileyo kakhulu xa kuthelekiswa nezinye i-Ibex 35. Oko kukuthi, akufuneki ukuba nefuthe kwisigqibo sotyalo mali oluncinci noluphakathi xa kulungiswa ipotifoliyo yabo elandelayo yotyalo mali.
Ngelixa kwelinye icala, iyaqhubeka nokuhamba inyuka inyusa isimemo sokungena kwizikhundla zayo ukuba zingasebenzi kunye nomngcipheko ogqithileyo. Kwelinye icala, kufanelekile ukuba ukhankanye loo nto IAmadeus kunye neEtihad Airways namhlanje babhengeza ulwandiso lwentsebenziswano yabo ekudala bekho yeenkonzo zokuhambisa kwiindlela ezininzi. Intsebenziswano ilawulwa sisivumelwano esihlaziyiweyo esiququzelelwe nguMbutho Wezothutho Lomoya waseArabhu (AACO). Kwicandelo lesitokhwe elibonisa idatha esisiseko elungileyo yokuqhubeka nokuthembela ukungena kwizikhundla zabo ukusukela ngoku.
IAG isekwe kwixabiso leoyile ekrwada
Elinye lamaxabiso ezabelo zaseSpain ekufuneka ziqwalaselwe xa kungenwa yi-IAG. Kodwa ukuba kwenzeka, ngeendleko zayo nayiphi na into yokuvela kweoyile kwiimarike zezemali. Kungenxa yokuba, ukuba kukho ukubuyela kwakhona ngaphandle kwamathandabuzo kuyakuba lixabiso apho kuya kufuneka ukuba ewe okanye ewe. Akukho mathandabuzo malunga noku kwaye ikwadweliswa ngalo mzuzu ngexabiso elifanelekileyo kakhulu nokhuphiswano ezinokuthi ziququzelele ukusebenza kwabatyali mali. Ngaphandle kolunye uthotho lokuqwalaselwa kwimiba yobuchwephesha eya kuba ngumxholo wamanye amanqaku ngokuqonda kwayo okugqibeleleyo.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba lolunye uvimba wesitokhwe onika esona sabelo sikhulu kubatyali zimali abancinci nabaphakathi. Kunye Umyinge wenzala kufutshane ne-7% kwaye sisimemo sokuvula izikhundla ukusuka kule nxalenye yesibini yonyaka. Kuba imbuyekezo kulondolozo iyakuqinisekiswa kule minyaka izayo, nokuba kwenzeka ntoni na kwiimalike zezabelo zamashishini ezingenanzala emisiweyo. Ngamandla ongezelelweyo okuba inokunyuka iye kumanqanaba kwixabiso layo ngaphezulu kwe-8 yeuros ngesabelo ngasinye. Logama nje ixhaswe kukunyuka kwexabiso elingenamsebenzi.
Njengoko sele ubonile, kukho uthotho lwamaxabiso afanelekileyo ngakumbi kunabanye kule nxalenye yonyaka. Apho banokwenza ngcono kunabanye kwaye kwimeko ezininzi kukhatshwa sisivuno esihle sesahlulo. Ukuze ukwazi ukwenza ukuba ukonga kwakho kunenzuzo kwimeko encomekayo kwiimarike zemali kwiinyanga ezizayo. Logama ixhaswa kukonyuka kwexabiso leoyile ekrwada.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Ngawaphi amaxabiso anokufakwa kwipotifoliyo kweli hlobo?
Iingcebiso zokutyala imali kurhwebo lwangaphakathi